China Sprayer uye Mist muchina Kugadzira uye Fekitori | Zhongmaohua
1. Utsi nemhute yemvura inoonekwa nemhando dzakasiyana dzemazino, uye mhedzisiro yeutsi nemhute yemvura yakanaka. Isa pombi yekufusha yeutsi, utsi hwakakura, utsi hwehutsi huri nani, uye utsi hunowedzera; Isa mvura pombi yekusvina mapaipi, iyo mhu mhu inokandira madonhwe yakawanda yakatsanangurwa uye yunifomu, mhutsi dzichiyangarara zvirinani, mhedzisiro yemushonga inogara, uye kudzivirira kwacho kunoshamisa, Iyo chaiyo yekupedzisira-yakaderera vhoriyamu yekushandisa sosi.
2. Iyo dhayamita yeaipi mhute yakagadzirwa neye mhute muchina isingasviki makumi matatu. Nekuremera kwehuremu, iyo yekupedzisira mhete dzakakora matumbu dzakaomeswa nemasimba. Izvo hazvingagadzike pasi nekukurumidza nekuda kwesimba rinokwevera semadonhwe anogadzirwa nevatenderi vechinyakare. Inoyerera, inokanganisa, uye inopinda mushe. Iyo inogona kukanganisa uye kugara mumhepo kwenguva yakareba. Kupinda mukati kweutsi kunogona kurondedzerwa sekutenderwa. Inokodzera zvikoro, zvipatara, maresitorendi, Kuuraya hutachiona uye kushambadzira nzvimbo dzinogara veruzhinji dzakadai semahotera, indasitiri yekuzvivaraidza, theatre, mota dzevatyairi, zvikepe, ngarava, mabhazi, uye zvimwe zvekufambisa zveveruzhinji; zviteshi, nhandare yendege, docks; mapaki, nzvimbo dzekugara, mabhandi akasvibira, marara ekuchinjisa marara, kudzivirira kwenzvimbo kudzivirira uye kudzora kweumhutu, nhunzi, mapete uye zvimwe zvezvisikwa zviri mumapurazi, mvura yedhorobha uye nzira dzinodziya, dzimba dzepasi, zvirongwa zvekudzivirira mweya wehurumende, nezvimwe, kudzivirira kupararira dengue fever kana hutachiona uye hosha dzehutachiona; Kudzvinyirira zvipembenene uye kuuraya magadziriso muzvitoro zvekuchengetedza uye zvigadzirwa
3. Mist sprayer inoshandiswa zvakanyanya mumuti, gorosi, mupunga, chibage uye zvimwe zvirimwa, zvidyarwa zvakasvibirira zvicherwa, miti yemichero, masango (masango ezvehupfumi, magadheni emadhorobha, maruva maredhi), minda yemiti uye zvimwe zvirimwa zvekudzora zvipembenene ; nzvimbo yakakura Kudzivirira kwezvirwere uye zvipembenene zvipembenene pamafuro;
Yepfuura: Dziviriro Yakafanira Disposable Kurapa Kudzivirira Kupfeka
Inotevera: Tsika China Disposable Factory Wholesale isina-kurukwa 3ply Chiso Mask